Yedu mabhenefiti - Yuyao Jera Line Inokodzera Co., Ltd.
Jera yakazvipira kupa inokwikwidza uye yakazara zvirongwa zvekubatsira kune vedu vashandi. Yedu mabhenefiti anosanganisira anotevera ruzivo:
Inokwezva Bhadhara Pasuru
Jera inopa vashandi muhoro unoyevedza wemubhadharo uye nharaunda inoshanda inokurudzira kukura nekusimudzira.
Pamusoro pekukwikwidza muhoro, isu tinopa akasiyana siyana mabhenefiti kune vedu vashandi ayo anosanganisira Chikwata chekutengesa mubairo, Vashandi vanofamba zvakanaka, Tsika dzezororo rubatsiro uye nezvimwe. Iyi mibairo yemari inogona kukurudzira uye kugonesa vanhu vedu kuteedzera zvishuwo zvavo, kuwedzera kwavo nyanzvi hunhu uye nekukwenenzvera hunyanzvi hwavo kuita mutsauko chaiwo mune ravo ramangwana.
Jera anobhadhara kutarisa kune mumwe nemumwe mushandi panyama uye nepfungwa hutano.
Isu tinopa inishuwarenzi yehupenyu yehupenyu uye kugara tichiongorora hutano. Isu tinobata nguva dzose hurukuro dzehupenyu uye zviitiko zvekuvaka zvikwata kubatsira vanhu vedu kuti vanzwe vakanaka uye vakavaka nzwisiso & hukama hwakadzika pakati pedu.
Yakabhadharwa Nguva yekubva （PTO）
Jera inopa yakawanda inopa yakabhadharwa nguva yezororo regore negore uye zororo dzetsika dzenyika. Isu tinonzwisisa kukosha kwekuve nenguva usiri pabasa, zvinobvumidza vashandi kuwana mukana wekuzvizorodza uye vane mamiriro ari nani ehupenyu hwakazara nebasa.
Pamusoro pezvo, isu takabhadhara mwana nguva yekubatanidza uye vanorwara pabasa, izvo zvinobatsira vashandi vedu kuti vawane mari dzekugara pavanenge vasiri kubasa.
Kudzidzisa uye Kuvandudza
Jera anotenda kuti kubudirira kwekambani uye hupfumi zvinoenderana nevanhu vayo, isu tinoisa mari kune vashandi vayo panguva yese yebasa ravo nekambani kuvabatsira kuvandudza zvizere matarenda avo nehunyanzvi.
Isu tinopa kudzidziswa uye kusimudzira kusimudzira kugona kwevanhu vedu uye kuvashongedzera nehunyanzvi, kusanganisira hutungamiriri kusimudzira, manejimendi manejimendi, hunyanzvi hwekutengesa nekutaurirana, zvibvumirano manejimendi, kudzidzisa uye manejimendi hukama hwevatengi.Mapurogiramu edu ekudzidzisa haangobatsire vashandi kuvandudza mashandiro avo basa ravo razvino asiwo vazvigadzirire kutora chinzvimbo chakaomesesa mune ramangwana.